Manompo an’Andriamanitra amin’ny maha ankohonana
Marobe ireo ankohonana izay manana ankizy tsy manaraka ny Tompo. Tian’Andriamantira raha ny ankohonana rehetra no manompo Azy.
Izao no fitsipika nomen’Andrimanitra
Ray (Efes 5, 23, 1 Tim 3, 4-5).
Ny ray dia tsy maintsy mitarika ny ankohonany amin’ny:
fampianarany ny Tenin’Andriamanitra
fivavahana miaraka amin’ny ankohonany
fanaovana ohatra tsara
fitiavana ny vadiny sy ny zanany
fanehoana fitiavana sy fahenterana
Read more: Manompo an’Andriamanitra amin’ny maha ankohonana
Read more: Mijery an’I Jesosy Kristy Tompo
Read more: Mila ny fampaherezan’Andriamanitra isika amin’ny fotoana mampahaketraka
Read more: Nahoana isika no mandray anjara amin’ny iraka?
Read more: Nandao ny zavatra rehetra izy dia nanaraka Azy.